Ilungelo-Visa kuba Yakho Internship kwi-China Isemthethweni Ingcebiso - China Internship Ubeko Hetalia - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Ilungelo-Visa kuba Yakho Internship kwi-China Isemthethweni Ingcebiso - China Internship Ubeko Hetalia
Akukho nawuphina greynetic kwiindawo simemo kwakhona
yiyo ngokwenene na ukuba kunzima, ingakumbi ukuba sihamba nge-CIP IqongaNangona kunjalo, i-China ifuna abaninzi abavela kumazwe angaphandle ukuze ufumane. Visa imigaqo ingaba constantly ukutshintsha, kunye nee-arhente ezahlukeneyo kunixelela a ngezixhobo ezahlukeneyo neenyaniso, ngoko ke apha siya kubonelela na wena amavandlakanya kunokwenzeka visas nibe kunikelwa, okanye ayikwazi encounter, ngexesha lakho Kunye kwiminyaka elishumi ndisebenza kwishishini njengoko i-expat, ndine experienced eziliqela visa-nkqubo utshintsho kwaye mna unako ukuthi ukuba Isitshayina Urhulumente engqongqo kunye yayo visa imigaqo kwaye ndiya kohlwaya na utyeshelo lomgaqo. Kunye kuvuka kwi-China ke kwezoqoqosho amagunya, Internships zisuke window amava Yamandulo ubukumkani ukusuka okhethekileyo imbono.
Abaninzi young graduates kwaye ngezifundo abafundi bamele eager ukuba fumana China ukuze baqonde oko ke sele ukunikela.
Kunye ngokuzingisileyo kuvuka, abadala ngokunjalo kuba wabona lencwadi ithi inzala ukusebenza nokwakha zabo career. Ngoko ke, kubalulekile ukuba sikwazi ukuqonda imigaqo elawula ungena, abahlala kunye ngokusemthethweni staying kwi-China Ukuba ufaka kokuqwalasela interning kwi-China, kufuneka ube abachaphazelekayo malunga securing ilungelo-visa kuba yakho internship kwaye soloko insist kwi ukufumana ilungelo udidi. Ke akukho ngasese ukuze Uluntu Ukhuseleko Buraex abasemagunyeni manqapha-nqapha ndwendwela workplaces ukuya kuqhuba routine le ngxelo ingakumbi emva. Ehlotyeni, i-shanghai wayenolwazi massive le ngxelo kwaye ezinye iinkampani baba fined. Eli nqaku liza kukunceda uyiqonde yintoni efunekayo kwaye visa yokwenza isicelo. I-Internship kwi-China-Visa, ndiya kuthi kukuba, kulula ukuba bathenge, ukuba ufumane ilungelo iziko ukukunceda ngapha kwayo yonke Emva ngomhla (phambi-), visitor F-visa ingaba ukuvumela kuba zintandathu -nyanga internship, ihlawulwe okanye non-ihlawulwe. Nangona kunjalo, nowadays i-wording ivumela abafundi ukuba intern wenziwe isuswe, kwaye sele kuba ngwevu indawo. Strictly ukuthetha, F-visas ichazwe njengoko kuba non-abarhwebayo"utyelelo, exchanges, inspections, njalo-njalo.", ndanikezela ingcaphephe invited kuba non-abarhwebayo iinkomfa, yenkcubeko exchange, uphando, ezenzululwazi technological zemfundo tours, okanye kuba emidlalo kunye nezinye impilo imisebenzi. I-F-visa kufuneka mhlawumbi hayi kusetyenziswa kuba internships, apho kusenokwenzeka ukuba kutheni abaninzi-zicelo nokufaka isicelo sephepha-internships kuba kokuba zabo F-visa izicelo asivunywanga. Noko ke, ukusukela ukuba akukho esemthethweni"internship visa"kwaye akukho ndawo ingaba oko strictly urhulumente ukuba i-F-visa zingasetyenziswa kuba i-internship kodwa China-visa udidi F (F-visas) ingaba? ndanikezela interns kwi-China ngabanye Internship Bamatyala. F-visas zezona zingcono isetyenziswe kuba xa wanting ukuba volunteer ngaphandle imbuyekezo. I-ncinci kakhulu ukulungiselela abo awunayo isemthethweni kwaye kuphunyezwe kwisebe unakho ukuvumela oku kodwa vumelani intern"lumkani"uninzi commonly wanikela internship visa ngu kwishishini M-visa, apho akavumeli i-intern ukuba kuhlawulwa kuba iinkonzo zabo ingenguye nawuphina ifomu imbuyekezo. Officially, M-visa kuphela kuba"commerce okanye urhwebo", nto leyo kutheni kubalulekile kakhulu elifutshane kwaye ifuna ukuphuma kwaye ingeniso wonke, okanye iintsuku ezingama.
Ekubeni ukushiya kweli lizwe kwaye kwakhona-faka China unako significantly yandisa iindleko zakho internship, kuxhomekeke kwimeko apho kufuneka intern.
Umzekelo, ukuba ngaba interned kwi-Beirut kwaye kwafuneka uhlaziye yakho visa kwi-Hong Kong, nibe ukuchitha phakathi RMB, kuba usuku lweveki-visa sebenzisa (qaphela: kufuneka kuya kufuneka ukuba bathabathe ubuncinane ngosuku ngaphandle umsebenzi), kodwa ukuba uye wahlala Shenzhen, ubuya? kufuneka ubuncinane ngosuku ngaphandle umsebenzi, kodwa ayikwazi mhlawumbi get kude kunye ngaphantsi kwe-RMB. Nangona i-M-visa ngu kuba ishishini of commerce norhwebo kwaye akukho ndawo ingaba oko strictly urhulumente ukuba i-M-visa zingasetyenziswa kuba i-internship, kodwa China-visa udidi M (M-visas) ingaba? kakhulu commonly wanikela visa kwi-interns kwi-China. Kukho ezinye internship bamatyala umthetho? anike ishishini visas ngu ngenxa yokuba iindleko kwabo nto.
Kodwa njengoko i-intern, kufuneka ube abachaphazelekayo malunga legality yakho hlala malunga ofanele uyenze kwi-China.
Kufuneka kwixesha elizayo ambitions kwi-China, yiyo loo nto imfuneko lumka. Uza kuba ukubhatala lwenkqubo imirhumo ngoko qinisekisa ukuba i-Arhente oninika ilungelo-visa nto kule meko ngu-X udidi apho zichaziwe kumacandelo amabini paragraphs Ezininzi iinkampani uya kunikela isikhundla, kodwa kufuna umgqatswa ukungena China nge tourist visa kuqala nge isithembiso ukutshintsha ke ukuba umsebenzi-visa, okanye enye efanelekileyo-visa, kamva. Oku kubaluleke ngakumbi inyaniso kunye isigxina imisebenzi inikezela. Nangona kunjalo, khumbula ukuba kubalulekile strictly mthethweni ukusebenza ngomhla tourist L-visa (akukho ngwevu indawo kwaphela), kwaye ukuba ngaba ayeza thatha i-arhente okanye yenkampani bait, kukho absolutely akukho siqinisekiso ukuba awuyi kuba nawuphi na umsebenzi amalungelo. I-zoko ekuqhutywa kwi tourist visa basenokuba i-umqeshi abo uyala ukuba uhlawule umvuzo, itshintsha kakuhle iimeko okanye aqhuba isixa-mali, okanye ezinye unethical utshintsho ngenxa yokuba inkampani uyayazi ukuba kufuneka akukho msebenzi amalungelo xa nisolko isebenza illegally. Ukongeza, siyazi ukuba awunakuba ingxelo kubo ukuba nabani na ngokuba yi-isebenza illegally ufuna engaging kwi-risky ukuziphatha ukuba ayikwazi iziphumo substantial fines okanye nkqu deportation. Umahluko phakathi X-visa (rhoqo alaphukanga ezantsi X kwaye X) no-F-visa kukuba X-visa abafundi kufuneka ube ebhalisiweyo residency. Abafundi abo nzulu kwi-China kunye iyunivesithi kwi-i-X-visa ingaba kuvunyelwe ukwenza internships nezinye umsebenzi njengoko ixesha elide njengoko baya kuba zingeniswe internship izicelo zabo izikolo kwaye wafumana imvume. Baye ngoko musani ukuba ukuvunywa ileta yobulali Ingeniso kwaye Ukhuphe i-office kwi-Wonke Ukhuseleko Bureau uhlaziye yabo yokuhlala amaphepha-mvume kunye oluneenkcukacha ulwazi malunga yabo entsha abaqeshi, ezifana inkampani igama, indawo, kwaye imisebenzi ubude. I-X Visa ivumela hlala ukuba ngonyaka kwaye unako kukhutshwa ngo iyunivesithi nge JW. I-X Visa iqhele ekhutshwe ukuba abafundi abaya hlala kwi-China kuba phezulu ukuya kwiinyanga ezintandathu. X-visa ayikwazi kwandiswa ngexesha mainland-China. Abanye kwiimeko ingayalela abafundi ukuba utyelele i-Hong Kong ukuba yandisa. Iinkampani ezifana Benz, Audi, Marriot Hotels, nezinye Fortune amakhulu amahlanu organizations kunye isemthethweni kwaye kuphunyezwe isebe liza kuphela yamkela X-visa.
Njengoko ekuqaleni kowama, kuphela ikuvumile visa kuba i-internship ngu-X udidi.
I-mthetho cacisa kwi yintoni kufuneka ufumane interns ngokusemthethweni yenza.
Kuya iindleko ufuna ezinye imali ukufumana hooked ngasekunene amaziko ukuba uza kukubonelela ilungelo-visa kodwa musa umngcipheko wakho Elizayo kwi-China kunye ezingachanekanga visa I-S-visa ngu kuba relatives ka-foreigners ophilayo kwaye besebenza China, ezifana silandelwa amaqabane kwaye makhaya abazali.
Oku amanyathelo ayisayi indawo imeko yakho kweli lizwe
Visa unako ngokuqhelekileyo kuphela kunikwa relatives ka-Z kwaye X-visa holders, kodwa iinkampani kwi-Beirut ke Zhongguancun Science Park vumela bonke langaphandle ngezifundo abafundi studying kwi-Beirut ukugqiba internships kunye S visas ukususela S (elifutshane) visa ngu loosely njengoko kuchaziwe kuba"private imicimbi". Ukuba ufuna a oluneenkcukacha uluhlu visas, China imiba ngaphandle ukususela oko uxoxwa apha, nibe khangela ngaphandle visa imigaqo-nkqubo kwi-websites ka-ukumbule ukuba nokuba visa uhlobo, non-ihlawulwe internships ingaba njengoko isemthethweni njengoko zinjalo e-United States nakwamanye amazwe. Qaphela ukuba ezahlukeneyo izixeko nokufumana ezahlukeneyo izikhokelo kwaye ukuba ezithile tech centers kuba ngaphezulu foreigner-eyobuhlobo imigaqo-nkqubo.
Ukuba baya kuyithumela visa amaxwebhu nge-imeyili apha: - ilungelo internship visa ifuna yoqobo amaxwebhu oko kuthetha ukuthi babe kufuneka azale ngokusebenzisa ebhalisiweyo i-imeyili (DHL okanye FedEx) kunokuba i-imeyili apha: kuba ufuna ukushicilela ngaphandle.
Lo ngumzekelo uphawu ngabo umnikelo ufuna i-mthethweni-visa. ukunikezela i-internship visa kuba kuni Nolu amalungiselelo, unoxanduva kodwa ekubeni arranged kuba kushishino Visa lento omkhulu red flag. Baya kukuthumela isimemo ileta nge-imeyili apha kubandakanywa scanned Ukhuphelo i-ID ikhadi a Isitshayina Ummi: - Lo ngumzekelo uphawu kuwe esiba a tourist visa kufuneka ukwala ngayo outright.
Yakho internship visa ifuna ukuba ube ibonelele nge-i-zemfundo iziko.
Oku kuthetha ukuba onke amaxwebhu kuza ukusuka kubo ngenxa yokuba urhulumente China sele ngokusemthethweni vested ezi amagunya bangena nabo. Ngomhla we-arrival, kufuneka utyelele Uluntu ukuba uzalise yakho yobhaliso kwaye officially bafanele ukuba intern kwi-China. Khuphela ka-Iziqinisekiso ukusuka Kubulungiseleli wemfundo (oko kuza kunye a red stamp). Olu xwebhu ivumela Iziko ukuba kukhutshwe i-visa sele zabo zonke iimbali. Isiqinisekiso incorporation (hayi ezifunekayo kuwo onke amazwe. Isitshayina Embassies ebekwe kwi-western Amazwe ayisayi kufuna lo) Ngoku Faka yakho visa amaxwebhu e-Isitshayina Consulate kulo ilizwe lakho. Kodwa ngaba okokuqala kufuneka ukufumana ukufakwa komthetho osayilwayo-ofisi. Le yindlela eqhelekileyo nkqubo, kodwa China yi sovereign urhulumente yiyo loo nto ugcine ilungelo vary le nkqubo. Zonke kufuneka ukuba uyazi yintoni ezingaphezulu amanqanaba olwazi iinkcukacha ezifunekayo kwaye umthetho ngokunjalo.
Get in touch kunye zethu isebe eliphetheyo ka-Visa ukufumana oluneenkcukacha isikhokelo sinako ukunceda wena ukukhusela ilungelo-visa emva abafikelela imeko yakho kwaye ukuthobela imigangatho yethu.
Nibe qhagamshelana nathi nge-CIP ibonelela internship iinkonzo kwaye izifundo zophando ngaphesheya amathuba.
Sibhale inqaku ngenxa yokuba kukho eziliqela unanswered imibuzo. Sino compiled lethu eliqhelekileyo senzo kwaye impendulo evela yethu esemthethweni abacebisi, koko ke, oku kunye. Njengoko imithetho tshintsha, sibe ukwenza izilungiso kuwo kodwa akunjalo, kuba netyala emva kwexesha uhlaziyo mna zithe approached nge ifemi kuba i-internship kuba ixesha ezintandathu. Nangona kunjalo, ufuna kum ukuhlanganisa iinkcukacha ezifunekayo ngenxa yam Isitshayina Visa. Ndingumntu college student of Indian Nationality kwaye kuba zintandathu -nyanga internship njengenxalenye wam college kwikharityhulam. Ndifuna ukwazi uhlobo visa ndimele avail kuba olu hlobo umsebenzi.
Ukuba ke i-Internship kwi-China, ngoko ke kufuneka X-visa.
Ezi uhlobo Visas ingaba esikhutshwe Namaziko emfundo. Ukuba ufuna uncedo kunye nokufaka isicelo sephepha-X-visa, sinako ukunceda wena. Nceda uthumele iqela leengcali zethu nge eli-imeyili Kindly ukhangele ibhokisi yangaphakathi, sino yaphendula yakho mbuzo. Get emva kuthi ukuba kufuneka kubekho imibuzo kwaye yethu esemthethweni WeChat i-akhawunti"Internship"ndiyabulela kuba uyakwazi ukwenza lo mba kwi inkcukacha, omnye bahlobo bam wabanjwa kwi-i-shanghai ngoagasti. Yena abaziwayo i-internship lwenkqubo kunye omnye nee-arhente abantliziyo-office kwi-UK. Yena wabanjwa kuba usebenzisa Ishishini Visa kuba yakhe internship. Xa sifuna abalandela kunjalo, amapolisa wathi kuthi ukuba zayo kuphela X-visa (student) zingasetyenziswa kuba abanjalo ngeenjongo ngabo aware abanye crook nee-arhente ingaba ekuncedeni unsuspecting Abafundi ukuba benze ezi yolwaphulo-mthetho.
'Bupa ye-inshorensi yezempilo wala ukuba ahlawule £, amakhulu amahlanu oyilwayo amatsha ukugula' - Telegraph